Ny fomba fijery malaza indrindra ao amin'ny Castle Neuschwanstein dia avy amin'ny tetezan'i Mary. Na izany aza, manjary feno olona izy ary saika tsy afaka maka sary avy amin'ny fomba fijery malaza. Ary noho izany, tokony hiakatra amin'ny havoana foana ianao ary handalo ny fomba fijerin'i Marienbrucke. Ny fomba fijery tsara indrindra any Alemana dia ny lalana zig-zag, avy amin'ny sehatra mimanda.
Te hampiditra ny lahatsoratray bilaogy “Topy fijery tsara tarehy 10 any Eropa” ve ianao amin'ny tranokalanao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-beautiful-viewpoints-europe%2F Nyawang- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)